ကျော်ကျော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က အရှုပ်တော်ပုံတွေကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာမြင့်မိုရ် – Iphone Myanmar
ကျော်ကျော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က အရှုပ်တော်ပုံတွေကို ဖွင့်ချပြလိုက်တဲ့ သင်ဇာမြင့်မိုရ်
admin · Posted on May 22, 2022
လူမှုကွန်ရက်မှာပုံရိပ်လေးတွေအမြဲတင်ပေးလေ့ရှိပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အမြဲမပြတ်ရှိနေသူပါ။ အခုမှာတော့သူမရဲ့တင်ထားတဲ့စာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားနေကြတာပါ။ နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ယောက်ကိုခုလိုပဲအချက်လက်တိကျစွာပြောဆိုလိုက်တာပါ။
မင်းသားတစ်လက် မြင်စေရန်.. ဒါမျိုးတွေ မရေးချင် မပြောချင်သော်လည်း.. ယောက်ျားတန်မယ့် စောင်းချိတ်ပြောဆို ရေးသားတတ်သော .. စောင်တင်းပြောတဲ့နေရာ နာမည်ကြီးသူ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ မင်းသမီးချစ်သူလေးက.. မိန်းမကောင်းလေးမို့ .. သူများသားသမီးတွေကို လာထိပါးနေတာလားဟင်?မသိလို့ပါ..
ကျွန်မက.. ရည်းစားတစ်ယောက်နဲ့ပြတ်လို့တစ်ယောက်တွဲတာ.. (သူများရည်းစား/ သူများယောက်ျား/မိန်းမ) နဲ့.. တွဲနေကြတာလည်း မဟုတ် .. အစ်ကို့စော်လေးလို.. အစ်ကိုရှိလျက်နဲ့သူများ ပေးစာ ကမ်းစာယူနေတာမျိုးအစ်ကိုကိုယ်တိုင် ထိုးကျွေးတာမျိုးEx နဲ့ Date တာမျိုး လက်ရှိနေထိုင်သောနေရာနဲ့ အစ်ကို လိုက်မောင်းနေတဲ့ကားလေးက.. ဘယ်က ရ ထားလဲ? သိလျက်နဲ့ အစ်ကိုရယ်.. အဲဒါကမှ အစ်ကို့နေရာ ဘာလဲ?
ညီမက.. မပတ်သတ်ချင်လို့တောင် Unfriend လုပ်လိုက်ပြီး မကြည့်ပဲနေတာလေ.. ဘာအကြောင်းမှ စိတ်မဝင်စားလို့ ခုလို ရက်နည်းနည်းကြာမှ သူများပြမှ သိရတော့.. အခုလို အောက်ဖဲလှန်တာတောင်နောက်ကျသွားလားမသိဘူး..အစ်ကိုအသိဆုံးပါနော်..
သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ဆိုတာ.. ​ဘယ်သူ့ ပေးကမ်းစာနဲ့မှ အသက်ဆက်နေတာ မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ နေလာတဲ့မိန်းမပါ.. မထိခလုတ် ထိခလုတ်နဲ့ -ျင် ထထမယားပါနဲ့.. တန်ရာ တန်ရာတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..
အေးချမ်းပါစေနော်..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ် မှားမှားမှန်မှန် ဘာညာ လာရေးနေသေးတယ် စုံစမ်းပါဦး အဲ့လင်မယားအကြောင်းလည်း.. ဘယ်အခမ်းအနားတွေခိုးတက်ပြီး ဘယ်နှစ်ကြိမ် မ ပြီးပြီလဲ ဆွာ အိပ်ကြပါတော့ဗျာ.. မနက်အလုပ်ပိတ်လည်း.. အိပ်ရေးဝဝအိပ်ကြပါ.. ဆိုပြီးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လူမႈကြန္ရက္မွာပုံရိပ္ေလးေတြအၿမဲတင္ေပးေလ့ရွိၿပီး ပရိသတ္ေတြနဲ႔အၿမဲမျပတ္ရွိေနသူပါ။ အခုမွာေတာ့သူမရဲ႕တင္ထားတဲ့စာေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြစိတ္ဝင္စားေနၾကတာပါ။ နာမည္ႀကီးမင္းသားတစ္ေယာက္ကိုခုလိုပဲအခ်က္လက္တိက်စြာေျပာဆိုလိုက္တာပါ။
မင္းသားတစ္လက္ ျမင္ေစရန္.. ဒါမ်ိဳးေတြ မေရးခ်င္ မေျပာခ်င္ေသာ္လည္း.. ေယာက္်ားတန္မယ့္ ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာဆို ေရးသားတတ္ေသာ .. ေစာင္တင္းေျပာတဲ့ေနရာ နာမည္ႀကီးသူ ကိုယ္တြဲေနတဲ့ မင္းသမီးခ်စ္သူေလးက.. မိန္းမေကာင္းေလးမို႔ .. သူမ်ားသားသမီးေတြကို လာထိပါးေနတာလားဟင္?မသိလို႔ပါ..
ကြၽန္မက.. ရည္းစားတစ္ေယာက္နဲ႔ျပတ္လို႔တစ္ေယာက္တြဲတာ.. (သူမ်ားရည္းစား/ သူမ်ားေယာက္်ား/မိန္းမ) နဲ႔.. တြဲေနၾကတာလည္း မဟုတ္ .. အစ္ကို႔ေစာ္ေလးလို.. အစ္ကိုရွိလ်က္နဲ႔သူမ်ား ေပးစာ ကမ္းစာယူေနတာမ်ိဳးအစ္ကိုကိုယ္တိုင္ ထိုးေကြၽးတာမ်ိဳးEx နဲ႔ Date တာမ်ိဳး လက္ရွိေနထိုင္ေသာေနရာနဲ႔ အစ္ကို လိုက္ေမာင္းေနတဲ့ကားေလးက.. ဘယ္က ရ ထားလဲ? သိလ်က္နဲ႔ အစ္ကိုရယ္.. အဲဒါကမွ အစ္ကို႔ေနရာ ဘာလဲ?
ညီမက.. မပတ္သတ္ခ်င္လို႔ေတာင္ Unfriend လုပ္လိုက္ၿပီး မၾကည့္ပဲေနတာေလ.. ဘာအေၾကာင္းမွ စိတ္မဝင္စားလို႔ ခုလို ရက္နည္းနည္းၾကာမွ သူမ်ားျပမွ သိရေတာ့.. အခုလို ေအာက္ဖဲလွန္တာေတာင္ေနာက္က်သြားလားမသိဘူး..အစ္ကိုအသိဆုံးပါေနာ္..
သဇၤာျမင့္မိုရ္ဆိုတာ.. ​ဘယ္သူ႔ ေပးကမ္းစာနဲ႔မွ အသက္ဆက္ေနတာ မဟုတ္ဘူး.. ကိုယ့္စည္း ကိုယ့္ကမ္းနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ေနလာတဲ့မိန္းမပါ.. မထိခလုတ္ ထိခလုတ္နဲ႔ -်င္ ထထမယားပါနဲ႔.. တန္ရာ တန္ရာတုံ႔ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္..
ေအးခ်မ္းပါေစေနာ္..ဪ.. မသိပဲ.. ကိုယ္ မွားမွားမွန္မွန္ ဘာညာ လာေရးေနေသးတယ္ စုံစမ္းပါဦး အဲ့လင္မယားအေၾကာင္းလည္း.. ဘယ္အခမ္းအနားေတြခိုးတက္ၿပီး ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ မ ၿပီးၿပီလဲ ဆြာ အိပ္ၾကပါေတာ့ဗ်ာ.. မနက္အလုပ္ပိတ္လည္း.. အိပ္ေရးဝဝအိပ္ၾကပါ.. ဆိုၿပီးေျပာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပြည်သူတွေ အားတက်စေမယ့် အားပေးစကားပြောလာခဲ့တဲ့ အဆိုတော် မူးလာ
admin · Posted on June 28, 2022
တောထဲရောက်နေသူတွေကို ပြောဆိုခဲ့တဲ့သူတွေ မှတ်ထားတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ လူရွှင်တော် ပြည်ကျော်
မြေပြင်က ရဲဘော်တွေအတွက် စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာပေးကြဖို့ ပြည်သူ့ကို တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ သရုပ်ဆောင် ဒေါင်း
admin · Posted on June 27, 2022
ပြင်ဦးလွင် ၂၁ မိုင်မှာ သမာအာဇီဝနဲ့ အကြော်ရောင်းပြီး အသက်မွေးနေတဲ့ Myanmar Idol က သားငယ်
အရင်လို ပျော်ခဲ့တဲ့အချိန်တွေကို သတိရပေမယ့် လက်ရှိအနေအထားကို ပြောပြလာတဲ့ အဆိုတော် R ဇာနည်
အိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့အကြောင်းတွေ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ လွတ်မြောက်နယ်မြေရောက် သရုပ်ဆောင် အောင်မြင့်မြတ်
အရင်နှစ်တွေက ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတဲ့ အချိန်တချို့ကို သတိရမိနေတယ်ဆိုတဲ့ ခင်လှိုင်
လူမုန်းခံပြီး ရေးခဲ့တဲ့ ပန်ဆယ်လိုရဲ့ ပြည်သူလူထုသို့ အကြံပေးစာ
admin · Posted on June 26, 2022
© 2022 Iphone Myanmar